စကျတငျဘာ ၂၈, ၂၀၁၉ - ၄:၁၉ ညနေ News Code : 978807 Source :7day Link:
ဤကျမ်းတော်မြတ်၏ သုံးစွဲထားသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းအရ ခန့်မှန်းရရှိ ရသည့် အချက်မှာ နဘီ (အ.စ) ကို လိုလားနှစ်သက်သူများ ၊ အနှိပ်စက်ခံရသူများ ကို ရှီအာ ဟု သုံးစွဲ ထားကြောင်း တွေ့ ရပါသည်။ ရှီအာ နှင့်ဆန်ကျင့် သူမည်သူပင်ဖြစ်နေပါစေ၊ ၎င်း သည် နဘီ တမန် တော်မြတ် (ဆွ) ၏ရန်သူ ဖြစ်ပါသည်။ထိုနည်းတူစွာ စူရဟ် ဆွာဖါသ် တွင် မိန့်ကြားထားပါသည်။
(انّ من شیعته لابراهیم)ဧကန်မုချ နူးရ် (အ.စ) ၏ ရှီအာများ တွင် ဟဇရသ် အီဗရာဟင်းမ် (အ.စ) သည်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ စူရဟ် ဆွာဖါသ် ၊ အာယသ်တော် အမှတ် ၈၃
ရှီအာဆိုသည့် စကားလုံးသည့် (အစ္စလာမ်) စတင်သည့်နေ့ ကတည်းက အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ဘက်တော်သားများအတွက် သုံးစွဲလာသည့် စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် ကိုယ်တော်တိုင် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် တွင်မိန့်ကြားတော်မူသည်။ (( ဟဇ ရသ် မူစု (အ.စ) မြို့ အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ချိန်တွင် လူထုအနေဖြင့် မေ့လျော့ပြီး အိပ်ပျော် နေကြ ပါ သည်။ ၎င်း(မူစာ (အ.စ)) အနေဖြင့် လူနှစ်ဦးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုမြင်ခဲ့ရ၏။ တစ်ဦးမှာ ၎င်း(မူစာ (အ.စ) ) ၏ နောက်လိုက် နောက်သား ရှီအာ ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ ၎င်း (မူစာ (အ.စ) ၏ ရန်သူများမှ ဖြစ်ပါသည်။ ထို နှစ်ဦး အတွင်းမှ ရှီအာဖြစ်သူ (၎င်း၏နောက်လိုက်) မှ ရန်သူ၏ ရက်စက် အနှိင် ကျင့်မှု ကိုတိုင် တန်လေ၏။ ထိုအခါ ဟဇရသ် မူစာ (အ.စ) အနေဖြင့် ၎င်းအား လက်သီး နှင့် တစ်ချက် ထိုးပြီး အဆုံး စီရင် လိုက်ပါသည်။ )) စူရဟ်ကဆွာဒ် ၊အာယသ်တော်အမှတ် ၁၅
မောင်လာအလီ (အ.စ) ၏ ရှီအာများ ကို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သဘောကျ နှစ်မြို့တော်မူ၏
عن ابن عباس قَال: لَمَّانَزَلَتْ (اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ(1))قَالَ رَسولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِعَلِیٍّ: هُم أَنتَ وَشِیعتُکَ یَومَ القِیامةِ رَاضِین مَرضِیّینَ(2).
ဟဇရသ် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် ဗင် အဘာစ် မှရီဝါယသ်တော်ဆင်ပြန် ထားပါသည်။ ဤအာယသ်တော်
(انالذینآمنواوعملواالصلحٰتأولئکھمخیرالبریّة )ကျရောက်ချိန် တွင် မဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) မှ ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) အားမိန့်တော်မူလေ၏။ အသင် နှင့်အသင် နှင့် အသင်၏ နောက်လိုက် နောက်သား ရှီအာ များသည် ကေယာမသ်နေ့တွင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင်အား နှစ်သက် သဘောကျကြပေမည်။ (ထိုအတူ) အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည်လည်း ၎င်းတို့အား နှစ်သက် သဘောကျတော်မူမည်။
تفسیر در منثور٦:٣٧٩؛ الصواعق المحرقہ:٩٦؛ تفسیر روح المعانی٣٠:٢٠٧؛ تفسیر جامع البیان٣٠:٢٦٥.
မောင်လာအလီ (အ.စ) ရှီအာများ၏ အာကေဗသ် (နောက်ဆုံးဘဝအခြေအနေ)
عن ابن عباس قال: لمانزلت(اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ)قال رسولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِعَلِیٍّ: أنتَ وَشِیعتُکَ تَأتِی یومَ القیامةِ رَاضِینَ مَرضِیّینَ وَیَأتِی عَدُوُّکَ غَضباناً مُقْمحِینَ. فَقال: مَنْ عَدُوِّیْ؟ قالَ: مَنْ تَبَرّأ َمِنکَ وَلَعنکَ(3).
ဟဇရသ် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် ဗင်အဘာစ် မှ ရီဝါယသ်တော်ဆင့်ပြန်ထားပါသည်။ ဤအာယသ် တော် ((ဧကန်မုချ ထိုသူများသည် အီမာန် သက်ဝင်ယုံဝကည်ကြပါသည်။ ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြပေသည်။ ထိုလူများသည် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး အဖန်ဆင်းခံများ ဖြစ်ကြပါသည်။ )) ကျရောက်ချိန် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မှ ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) အားမိန့်တော် မူလေ၏။ အသင် နှင့်အသင် နှင့် အသင်၏ နောက်လိုက် နောက်သား ရှီအာ များ၏ ကေယာမသ်နေ့တွင်ရောက်ရှိလာမည့် အခြေအနေမှာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်အား နှစ်သက် သဘောကျကြပေမည်။ (ထိုအတူ) အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည်လည်း ၎င်းတို့ အား နှစ်သက် သဘောကျတော်မူမည်။ အသင်(အလီ (အ.စ) ) ၏ ရန်သူသည် ဒေါသထွက်နေသည့် အခြေအနေဖြင့် မဲဟ်ရှဲရ်ကွင်းပြင်တွင် ရောက်ရှိ လာ မည်ဖြစ် ပါသည်။ ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) အနေဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အား မေးမြန်း လျှောက်ထား ပေမည်။ (အိုကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ကျနော်မျိုး ၏ ရန်သူသည်မည်သူဖြစ်ပါသနည်း ? အဖြေပေး တော်မူမည်။ အသင်အား မုန်းတီးကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောသူ နှင့် အသင်အပေါ် လအ်နသ် ပို့သူ ဖြစ်ပါသည်။
٦:٣٧٩؛ تاریخ دمشق٢:٩٥٨٤٤٢.
မောင်လာအလီ (အ.စ) ရှီအာများသည် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး အဖန်ဆင်းခံ ဖြစ်၏
عن جابر بن عبدالله قال: کُنَّا عِند النبیِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَأَقْبلَ عَلِیّ فقال النبیُ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وَالذِی نَفسِی بِیَدهِ اِنَّ هَذا وَشِیعتَهُ لَهُم الفائزونَ یَومَ القِیامَةِ وَنزلتْ (اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ) فَکانَ اَصحابُ النبیِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اِذَا أَقْبلَ عَلِیّ قَالُوا: جَائَ خَیْرُ البَرِیَّةُ(4).
ဟဇရသ် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် ဗင်အဘာစ် မှ ရီဝါယသ်တော်ဆင့်ပြန်ထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ထံတွင် အခစားဝင်နေ ကြပါသည်။ထိုအချိန် အလီ (အ.စ) သည်လည်း ကြွမြန်းလာပါသည်။ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အနေဖြင့် မိန့်တော်မူသည်မှာ - ၎င်း၏ စွမ်းအားတော်တွင် ကျွန်ုပ်၏ အသက်ရှိတော်မူသည့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်၏ ကစမ်ကျိန်ဆိုပါ၏။ ဧကန်မုချ သူ (အလီ (အ.စ) )နှင့် ၎င်း၏နောက်လိုက်နောက်သားရှီအာများသည် ကေယာမသ်နေ့တွင် အောင်မြင်သူများ ဖြစ်ကြပါမည်။ ပြီးနောက်ဤ အာယသ်တော် ((ဧကန်မုချ ထိုသူများသည် အီမာန် သက်ဝင်ယုံဝကည်ကြပါသည်။ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြပေသည်။ ထိုလူများသည် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး အဖန်ဆင်းခံများ ဖြစ်ကြပါသည်။ )) ကျရောက်လာပါသည်။ ပြီးနောက် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ သာဝကတော်များ သည် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) ကြွမြန်းလာသည်ကို မြင်သည့်အခါတိုင်း ခိုင်ရွရ်ဗရီယဟ် (အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံးအဖန်ဆင်းခံ) ကြွမြန်းလာနေပြီးဟု ပြောကြလေသည်။
تفسیر درّمنثور٦:٣٧٩؛ تاریخ دمشق٢:٩٥٨٤٤٢.
မောင်လာအလီ (အ.စ) ၏ ရှီအာများ၏မျက်နှာတော်များသည် နူးရ် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိပေသည်
عن علی علیه السلام قال: قال لی رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :
أَلَمْ تَسْمَعْ قَولُه تعالٰی(اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ) هُمْ أَنْتَ وَشِیْعَتُکَ وَمَوْعِدِی وَمَوعدکُمْ الحوضَ اِذَا جَائَتِ الاُمَمُ لِلحسابِ تُدعونَ غُرّاً مُحَجِّلِیْنَ(5)
ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) မှ ရီဝါယသ် ဆင့်ပြန်တော်မူသည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် ကျွန်ုပ်အား မိန့်ကြားတော်မူသည်။အသင်အနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ဤအာယသ်တော((ဧကန်မုချ ထိုသူများသည် အီမာန် သက်ဝင်ယုံဝကည်ကြပါသည်။ ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြပေသည်။ ထိုလူများသည် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး အဖန်ဆင်းခံများ ဖြစ်ကြပါသည်။ )) သည် အသင်(အလီ (အ.စ) ) နှင့် အသင်၏ နောက်လိုက် နောက်သား ရှီအာများ ဖြစ်ပါသည်။အသင်နှင့် ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံရမည့် ကတိပြုထားသည့်နေရာမှာ ကောင်စဲရ် ကေန်တော် ဖြစ်ပါသည်။ ရှိသမျှ အွန်မသ်တော်များ၏ စာရင်းအင်း ရှင်းရန်အတွက် အသင်အား ဖိတ်ခေါ်တော်မူ မည်ထိုအချိန် အသင်၏ မျက်နှာတော် သည် လင်းဝင်းတောက်ပ နေပေမည်။